Global Voices teny Malagasy » Fiarahamonina Teratany Ao Paragoay Manohitra Ny Tohodrano Lehibe Indrindra Manerantany Famokarana Herinaratra · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 05 Janoary 2018 8:07 GMT 1	 · Mpanoratra Fernando Ferreira, Kurtural Nandika (en) i Laura Vidal, Vero
Sokajy: Amerika Latina, Paragoay, Mediam-bahoaka, Teratany
Famintinana ny andian-dahatsoratra nataon'i Kurtural ito lahatsoratra ito ary naverina natonta sy navoakan'ny Global Voices miaraka amin'ny alalana sy fandraisana anjaran'ireo mpanoratra ao aminy. Ampahany manokatra ny andian-dahatsoratra “Tsy mandeha any amin'ny tsena goavana ireo izay voaroaka “, izay mipoitra eo amin'ny tranonkala voalohan'ny Global Voices
Tamin'ny 2016, fanindroany no nahitan'i Cristóbal Martínez ny vondrom-piarahamoniny noroahan'ilay tohodrano famokarana herinaratra Itaipú , anisan'ireo tohodrano lehibe manerantany mpamokatra herinaratra. Fiarahamonina manana fifandraisana ara-panahy mahery amin'ireo renirano manodidina ny taniny ny vahoaka Ava Gurani avy ao Sauce ao amin'ny departemanta Alto Parana  ao Paragoay (midika hazo malahelo koa ny ‘Sauce’ amin'ny teny Espaniola). Rehefa tonga ny fandroahana, voatery nijery an'ireo polisy mandoro ny tranony ry Martinez sy ny olony. Niafina niaraka tamin'ny entany teny amin'ny toerana lavitry ny tanindrazany, nahita ny tapỹi-ny (ny vohitr'izy ireo) lasa lavenona. Tsy nifanalavitra tamin'ny fandroahana farany ny zavamisy, izay nanery azy ireo niala an'i Sauce 30 taona tany aloha. Tamin'ity kosa, tsy vitan'ny Ava Gurani ny handao ny sisin'ny renirano Paraná  izay antsoin'izy ireo hoe fonenana.
Tamin'ny 30 Septambra 2016, taorian'ny andrana fandroahana, andiana fiara roa ambin'ny folo an'ny Vondrona Manokana mpanao hetsika avy amin'ny Polisy Nasionaly (GEO), Polisy mpitaingina soavaly ary mpiasam-panjakana avy ao amin'ny Ivon-toerana ho an'ny vazimba teratany Paragoanina  (INDI) no tonga tao am-bohitra mba hanamarina ny fiadanan'ny Ava Guarani, saingy nijanona niafina ilay vondrom-piarahamonina.
Ho an'i Martinez, mpitarika ito vondrom-piarahamonina ito, efa lalina ny tsy fahatokisana ny manampahefana. Nananatra azy ny tantara fa tsy misy dikany ny tenin'ireo olona fotsy ireo ary mampidi-doza ny lainga soratana amin'ny taratasy. Tamin'ny 13 Septambra 2016, nanao sonia didim-pitsarana momba ny fandroahana azy ireo ny mpitsara Emilio Gómez Barrios. Nodidian’i Gómez Barrios ny fandroahana azy ireo ho toy ny vokatry ny fangatahan'ny Germán Hutz, mpamokatra soja matanjaka ary zaodahin'ny Filoha lefitra Paragoaianina Juan Afara .
Ilay tohodrano Itaipú famokarana herinaratra no famantarana fivoarana lehibe indrindra ho an'ny fitondrana jadon'i Alfredo Stroessner . Tamin'ny Aprily 1973, nosoniavin'i Stroessner ny fifanarahana momba ny Itaipú niaraka tamin'ny Jeneraly Garrastazú Médici , filohan'i Brezila tamin'izany fotoana izany. Tamin'izany, midika findramana vola betsaka ny dindon'i Etazonia eo amin'ny fitondrana jadon'ny miaramila ao Amerika Latina ary tsy miavaka amin'izany i Itaipú. Vetivety dia tonga ny vola nindramina ary tafatsangana ny tohodrano.
Nahilika tsy ho tao anatin'ny ankilany Paragoaianina tamin'ilay tatitry ny Komitin'ny Fahamarinana sy ny Rariny  izay noforonina teo anelanelan'ny 2002 sy 2008 ny zava-tsarotra niainan'ireo Ava Guarani, tao anatin'ny ezaka hanomezana ny rariny ho an'ireo niarahan'ny fitondrana jadona.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/01/05/112669/
 Tsy mandeha any amin'ny tsena goavana ireo izay voaroaka: https://kurtural.com/desterrados-editorial/
 tohodrano famokarana herinaratra Itaipú: https://en.wikipedia.org/wiki/Itaipu_Dam
 departemanta Alto Parana: https://en.wikipedia.org/wiki/Alto_Paran%C3%A1_Department
 Ivon-toerana ho an'ny vazimba teratany Paragoanina: https://www.paraguay.gov.py/indi
 nosoniavin'i Stroessner ny fifanarahana momba ny Itaipú niaraka tamin'ny Jeneraly Garrastazú Médici: http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/asi-nos-enganaron-el-26-de-abril-de-1973-1474906.html
 Komitin'ny Fahamarinana sy ny Rariny: http://www.derechoshumanos.net/lesahumanidad/informes/paraguay/Informe_Comision_Verdad_y_Justicia_Paraguay_Conclusiones_y_Recomendaciones.htm